Iza aho? Ny valiny bodista lalina amin'ity fanontaniana mahaliana ity - Fanahy
Isika rehetra fotsiny dia nandinika an'ity fanontaniana ity, na teo am-pandriana teo am-pandriana tamin'ny marainan'ny maraina, na taorian'ny nanontanian'ny olon-tsy fantatra iray manontolo izany tamin'ny fisakafoanana hariva.
Ny sasany mahatsapa fa azony tsara hoe iza izy ireo, fa ny sasany kosa mety manandrana mitsako azy ireo raha mbola araka izay tratrany mba hahafahan'izy ireo mamaly valiny mamy.
Raha sahirana ianao amin'ny valiny marimaritra iraisana amin'ity fanontaniana ity dia mety hahaliana anao ny foto-pinoan'ny Buddhist Anatta, na 'tsy-tena'.
Amin'ny ankapobeny, ny hevitra hoe tsy misy, raha ny marina, ny 'ianao' mihitsy.
Andao hiroboka lalindalina kokoa, sa tsy izany?
Makà fotoana kely handinihana izay mahatonga anao ho “Ianao”.
Ny hoditrao ve? Ny vatanao? Ny endrikao? Ny toetranao?
Raha ny mijery ny fitaratra no valinteninao, mamantatra ny tenanao amin'ny vatana hitanao eo alohanao, makà fotoana kely handinihanao fa ny ankamaroan'ny sela ao amin'ny vatanao dia maty tsy ho faty sy mihary indray.
Ny sela mena dia maharitra volana vitsivitsy monja, ka ny rà mandriaka mankamin'ny lalan-drantsika dieny izao dia tsy ilay ra izay hikoriana ao amin'ity taona ity.
Ny sela sasany dia elaela kokoa, saingy io vatana io dia miova tsy tapaka.
Raha nanao fandidiana plastika ianao mba hanovana ny endrika tarehinao, dia mbola ianao ihany ve?
Ahoana raha nahazo hoditra hoditra ianao? Sa toe-javatra toy ny vitiligo, izay mahatonga ny hoditrao hahavery loko?
Raha very rantsambatana amin'ny lozam-pifamoivoizana ianao?
Andao hodinihintsika ny eritreritrao, ny hevitrao, ary ny safidinao manokana. Manana izany eritreritra izany hatrany ve ianao?
Niova ve ny zavatra mahaliana anao sy ny fitiavanao ny taona?
Moa ve ianao manaraka ilay fivavahana nitaizana anao, na nisafidy ny handeha amin'ny lalana hafa ianao?
Raha miova be ny vatanao sy ny eritreritrao, dia iza marina izany ianareo ?
Skandhas: Ireo Aggregates dimy
Ao amin'ny Buddhism, misy ny hevitra hoe skandhas (Sanskrit ho an'ny 'groupings' na 'fanangonana'), izay manondro anton-javatra dimy mandrafitra ny fisian'ny sentient.
TSARA : ny raharaha izay nitambatra mba hamoronana endrika vonjimaika ny maha-olona (noho izany, ny sela rehetra sy ny bitika ara-batana ary ny bobs izay nahatonga ny vatanao).
Vedana : fahatsapana mifandraika amin'izany endrika izany, toy ny fahafinaretana sy ny fanaintainana.
Samjna : fomba fijery, toy ny famantarana karazan-kazo.
Sankhara : eritreritra, hevitra, ny 'imprint' an'ny zavatra.
Vijnana : fahatsiarovan-tena sy fanentanana.
Ireo dia atambatra ho olona iray hamorona iray manontolo, fa izy ireo kosa dia miova tsy tapaka.
Ny tsirairay dia ephemeral, noho izany ny olona dia mety ho toa mafy orina, mety mifampiresaka sy mahatsapa hanoanana ary manana eritreritra mahaliana momba ny tontolo manodidina azy, fa ny lafiny rehetra izay mahatonga azy io dia hiova am-po roa na roa.
Tsy misy fitohizan'ny 'tena' tsy miova, maharitra, fa firaisan-kina vetivety fotsiny, vita amin'ny ampahany izay hanjavona indray tsy ho ela.
Manazava zavatra ve izany? Sa mampisy fisafotofotoana fotsiny?
Ny Parallel Ocean
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra manazava zavatra dia amin'ny fisainana ny ranomasina. Mahareta kely amiko, eto.
Rehefa mieritreritra ny ranomasina ny olon-tsotra dia mahatsapa izy ireo fa azony tsara hoe inona izany.
Rano lehibe ny ranomasina, sa tsy izany? Milomano ao ny olona, ​​sambo mitaingina azy, ary miseho amin'ny karatra paositra tsy tambo isaina manerantany.
OCEAN io. Fantatsika rehetra izany.
Okay, saingy mihoatra lavitra noho izany. Ilay zavatra antsointsika hoe ranomasina dia fisehoana ivelany fotsiny, feno onja ary sombin-javatra manjelanjelatra.
Tsy maharitra ny rano ao anaty ranomasina: tototry ny rotsakorana. Molekiola rano izay nitety izao tontolo izao, tamin'ny alàlan'ny latabatra ambanin'ny tany, nopotehin'ny olombelona, ​​nopotehina tamin'ny xylem hazo.
Manjavona toy ny zavona izy rehefa mianjera amin'ny vatolampy na etona rehefa mahavoa lava vaovao, ary miakatra ho rahona.
Milentika mankany amin'ny lakandrano izy ary lasa mangatsiaka be. Izy io dia vita amin'ny poti-javatra rehetra izay mitsingevana manodidina ny molekiola misy azy, ary manana biby sy zavamaniry tsy tambo isaina teraka, velona ary maty isaky ny fotoana.
Tsy maharitra izy io ary miovaova foana.
Mitovy be amintsika.
Ka inona ary ny ranomasina? Ity planeta ity dia rakotry ny rano indray mandeha, ary ny ranomasina dia nandehandeha teto nandritra ny 4 miliara taona lasa.
Mitovy amin'ny ranomasina hitanao ve io ranomasina io ankehitriny? Tsia. Nefa ny Ranomasina.
Ahoana ny fomba hahalalana bebe kokoa ny tenanao amin'ny fanontaniana 7
Soul Self VS Tsy misy Tena
Ho an'ny olona maro, ny hevitry ny tenany dia manondro ny hevitry ny fanahy iray: ny toetra ara-panahy / mavitrika izay nijanona ho tsy miova mandritra ny androm-piainany.
ireo zavatra mampiavaka ahy
Ireo izay mino ny reincarnation dia mety mino fa io fanahy io dia lasa an-tapitrisany taona lasa izay, ary efa niaina tamin'ny endrika hafa hatramin'ny vao mangiran-dratsy.
Andao hiverina any amin'io ranomasina io izay vao niresaka fotsiny isika, ary alaivo sary an-tsaina hoe misy mandray vera ary mikopoka azy feno rano ranomasina.
Maneho ain'olombelona ity rano ity.
Ny foto-kevitry ny reincarnation Hindoa dia misy an'io rano mikoriana avy amin'ny vera iray mankany amin'ny iray hafa, ary avy eo ny iray hafa, amin'ny endrika sy habe samihafa (vera, mugs, kaopy, siny, kiraro, sns.).
amin'ny Anatta , hafa tanteraka ny foto-kevitra.
Raha miresaka momba ny ranomasina indray, ny eritreritra sy ny sombin-javatra rehetra izay nahary zavaboary iray dia niparitaka tamin'ny farany, sahala amin'ny famoahana rano feno vera ao anaty ranomasina.
Raha misy ny fahaterahana indray dia toe-javatra iray vera hafa atsoboka ao anaty ranomasina ho feno indray.
Mety misy molekiola sy sombin-javatra roa avy amin'ilay vera teo aloha tamin'ity iray vaovao ity, saingy hafa tanteraka noho ilay teo aloha izy io.
Mandritra izany fotoana izany dia mbola rano ranomasina ihany, sa tsy izany? Mbola ny ranomasina ao anaty vera tokana.
Ny hevitra dia mety hahasadaikatra, saingy tsara ho an'ny fahafantarana ny maha-iray ny fiainana hafa rehetra eto amin'ity planeta ity. Isika rehetra dia zavaboary mandalo andro aman'alina, izay misy ny zavatra rehetra nisy taloha, ary ny ho avy rehetra.
Ankoatr'izay, mamela antsika hamela ny karazam-pahoriana rehetra (na Dukkha ) mifandraika amin'ny ego, ny faniriany ary ny tsy fankasitrahany.
Raha tsy misy ny tena dia tsy misy ny tsy ampy, ka tsy misy antony irina.
Famelana ny fametahana ny fifandraisana amin'ny 'IZAHO'
Tena sarotra ho an'ny ankamaroan'ny olona ny misaron-doha ny hevitra hoe tsy misy ny 'I' ahafantarana azy.
Rehefa dinihina tokoa, hatramin'ny andro voalohany, dia nantsoina tamin'ny anarana izay nanendrena anay izahay, mivelatra ny safidin-tsakafo sy ny loko ankafizinay, mahita lohahevitra izay mahaliana antsika , ary araho ny lalan'ny asa izay (antenaina) mampifandray antsika.
Araka izany, ny fiatrehana tampoka ny hevitra fa izany rehetra izany dia fiheverana diso mety miainga amin'ny fampisavorovoroana ny saina, amin'ny fampitahorana.
Izahay dia zatra mamaritra ny tenanay amin'ny fomba maro, manomboka amin'ireo lohateny nomena anay tamin'ny alàlan'ny fahaterahana na fanabeazana, hatramin'ny famaritana ireo aretina sy karazan'olona iharan'izany.
Mpanao mozika aho.
Izaho dia afa-nandositra aretina.
Ray aman-dreny aho.
Marary saina aho.
Kandidà amin'ny dokotera aho.
Eny, ireo rehetra ireo dia lafiny iray amin'ny tenany tsy maharitra, fa raha tsy misy 'ianao', dia lasa moot daholo ireo marika ireo. Azonao atao koa ny manandrana manisy marika ny rivotra.
Raha tsy misy ny 'I'… dia inona daholo izany fiainana mahatsikaiky izany? Inona ny hevitra?
Ny tanjona, amin'ny farany, dia ny manao ny marina ho .
ny hiaina zavatra amin'ny fotoana rehetra ary avelao handeha izy ireo, tsy miraikitra amin'ny zavatra iray na hafa, satria hiova segondra iray ihany ny zava-drehetra.
Misy fandriam-pahalemana sy fahanginana miavaka rehefa mamela ny tena hamela ny fiheverana atosiky ny ego ary hipetraka amin'io toerana foana io eo anelanelan'ny fitepon'ny fony.
Amin'ny manaraka raha misy manontany anao hoe iza ianao, valio amin'ny hoe 'Izaho', satria io ihany no valiny marina sy marina azonao omena.
Inona ny hevitrao? Hitanao fa mampionona, na mampisafotofoto ny fihevitr'i Anatta?
ny fomba hitsaharana tsy ho vady saro-piaro
mahatsiaro ho meloka ve ianao rehefa avy misoloky
indraindray te-ho irery aho
mpiady wwe maty tamin'ny 2018